Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts
ikhaya IIMALI ZE-EUROPE Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts
Disemba 20, 2017
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeNqampu; "Abancinci". Ibali lethu le-Ashley Young Childhood kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukusuka kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lakhe lokuqala lobomi ngaphambi kobomi, ubuhlobo bentsapho, ubomi bentsapho, iinjongo zobuqu, ubuhlobo bentsapho kunye, Ubomi bentsapho kunye nezinye izinto ezincinci eziyaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe ahlukeneyo kodwa abambalwa bacinga i-biography ye-Ashley Young enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
U-Ashley Simon Young wazalwa ngomhla we-9th kaJulayi 1985 eStevenage, eUnited Kingdom. Wazalelwa kwiCancer kubazali baseJamaican, uMnu noMnu Luther Young.
Osemncinci waya kwiYohn Henry Newman School eStevenage. Yilapho aqala khona ukudlala ibhola. Enyanisweni, u-Young wadlala ibhola yebhola kunye nomqhubi weFomu yoMnye uLee Hamilton, owayengumnyaka ofanayo.
Akazange abe kude nebhola elifanelekileyo ukusuka ebuntwaneni bakhe. Wazalelwa waza wakhulela eHertfordshire waza waqala umsebenzi wakhe wobutsha ngexesha le-10 eWatford. Waba yikomiti yokuqala e-2004-05 kwaye wayengomnye wabadlali abakhulu be-Watford kwi-2005-06 yexesha lokunyusa.
Abaselula baqhubeka bedlala kakuhle kwiWatford kwiNkulumbuso yaseNkulumbuso, kwaye ngoJanuwari 2007 wadlulisela e-Aston Villa. Wazimisela kwikomiti yokuqala e-Villa Park waza wamphola umvuzo we-PFA Omtsha weNyaka kwi-2009. Ngo-23 Juni 2011, osemncinini usayinele iManchester United ngenkokhelo engachazwanga. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ubomi bobudlelwane buka-Ashley Young bujoliswe kumfazi omnye. Akukho mnye umntu kunomntwana omnandi, uNicky Pike. Bobabini baqala ukuthandana xa besesesikolweni.
Iintlobo ezimbini zeentaka- u-Ashley Young kunye noNicky Pike
U-Ashley Young wazama ukubhiyozela ixesha lakhe lokumisa eManchester United ekugqibeleni wadibanisa iphoyinti enobubele bomntwana uNicky Pike. Nangona kunjalo, kwenzeka into enhle.
I-England ingxowankulu yabashiya abahlobo kunye nosapho batshitshiswe xa wayedlala umkhosi wakhe we-£ 200,000 umtshato ngaphandle kwebala eliluhlaza okwi-48 iiyure ngaphambi kosuku olukhulu kwi-2011. Isizathu sokususa umtshato wakhe sisagcinwa singaziwa. Nangona kunjalo, isigqibo sakhe sokugqibela sashiya zombini iintsapho ezinamaqanda abandayo.
U-Ashley wenza emva kweminyaka emine kamva. Wenza omnye umtshato waza wahamba watshata noNicky Pike.
U-Ashley Young ekugqibeleni utshata noNicky Pike
Bobabini isibini sinabantwana ababini, unyana oneminyaka elithoba ubudala uTyler nentombi encinci uSarna.
Intsapho enhle ka-Ashley Young
Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Iingxabano
Ekupheleni kwe2017, Young kunye Alli bekunye babandakanyeka kwi-30th minute spat ngexesha iManchester United iphumelele kwiTottenham emva kokuba uMnumzana utsho ukuba ubanjwe ebusweni nguSperge Aurier. Alli babandakanyeka baze bahamba ngentloko kunye nentsha phambi kokuba abadlali bevela kumacala amabini bangenelela ngexesha le-half-melee.
Izenzibe phakathi koLutsha kunye Alli yaqhubeka emva kompempe uJon Moss uzame ukucima imeko. Ababheki baqonda ukuba Alli wazisa i-32-ubudala ubudala 'uthathe umhlalaphantsi ngesimiso se-zimmer'. Osemncinci, ophumelele iNkulumbuso, i-FA Cup, i-League Cup kunye ne-Europa League kunye ne-United, ukholelwa ukuba uye waphendula ngokucebisa Alli ukuba angathethi kuye ngokungahloneliyo ade aphumelele into ethile.
Umncinane wagqiba ukuphikisana ngokuxelela uAli: "Ndixelele xa uphumelela i-Prem." Izenzi zenziwayo ziqondwa ukuba ziqhubekile kwi-tunnel emva komdlalo owawuthanda u-Young.
Mncinci AlliUmlomo emva komdlalo kunye i-tweet efundeka: "Omkhulu weqela loMoya. Isiphumo Esihle kakhulu. Intetho ixabiso. "
Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UTATA: Uyise waseJamaan, uLuther Young uxhasa iTottenham Hotspur. ULuther uye wathatha isampula intsapho yakhe kakhulu-kuyo yonke into enomdlalo oMnandi.
UMAMA: U-Ashley Young's Jamaican umama kaSharon akanalo ngaphandle kokuthumela iibhokisi ze-inkukhu eyayikuthanda kakhulu yasekhaya yaseJamain. Amazwi aseLutsha ... Ukutya kukukhumbuza ngobuntwana. Kuyonwabile ukuba nefa lam mama kunye nelifa elivela eJamaica. Xa sakhula elalikude kakhulu into enditya ngayo. Ingikhumbuza imbali yam ".
USharon Young nomyeni wakhe bahlala phantsi kwezantsi ngelixa u-Young ngokwakhe enyakatho eManchester.
ABAKHULU: Unomzalwana omdala (uMartin Young) oxhasa uArsenal. Iqhawe lakhe kunye nomzekelo wolu hlobo kunye no-Ian Wright. Kwakhona, U-Ashley unabantwana abancinci bebhola ebhola bebhola, uWilliam Young, owenzela iWotford kwi2008 yakhe yokuqala, kunye noKyle Young, ngo-Ephreli 2009 uqeqesho kwiArsenal Academy.
Ewe, ABAKHO BABASEBENZINI ngegama, kodwa amava oku kwintsapho enayo kwibhola engenakulinganiswa. UMartin Young ngumdala we-6 kuno-Ashley. U-Ashley uneminyaka engama-4 emdala kunokuba uLee Lewis no-Lewis baneminyaka engama-7 emdala kuneKyle.
ULee wakha umsebenzi omude wokuhlala kunye nezinto ezithandwa nguBurton, Northampton kunye ne-Crawley ngoku. Bobabini uMartin noKyle baye babona amaphupha abo aqeqeshelwa ngenxa yezizathu ezahlukileyo. I-quartet igcina idibaniselwano imihla ngemihla ngeengxoxo zeqela le-Whatsapp, kunye noLee no-Ashley ngokugqithiseleyo ngenxa yokusondelana kwabo kwiminyaka kunye neentshintsho zabo zakutshanje ukusuka kwiseyili ukuya kwi-back-back.
Ngokwenene, ngokudlala eNgilani kunye nokuwina isihloko seNkulumbuso, ukuyikhupha kwiilwimi ezingezantsi, ukukhathazeka kwenzondo eyonakalisa i-career ngaphambi kokuba iqalise - abaNtsundu bayibonile konke.
Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts -isimo
U-Ashley unomdlavuza kwaye unezi zinto ezilandelayo kubuntu bakhe bobudidi;
Amandla ka-Ashley Young: Ukuxhamla, ukucinga, ukunyaniseka, ukuvakalelwa, ukuva novelwano kunye nokukholisa.
Ubuthathaka buka-Ashley Young: I-Moody, i-pestic, i-suspect, ixhaphaze kwaye ikhuselekile.
Oko u-Ashley Young akuthandayo: Ubugcisa, izinto zokuzonwabisa ezisekhaya, ukuphumla kufuphi okanye kumanzi, ukunceda abathandekayo, ukutya okulungileyo kunye nabahlobo
Oko u-Ashley Young akuthandiyo: Abaphambukeli, naluphi na ukugxeka umama, ukutyhila ngobomi bomntu.
Iindaba ze-Ashley Young Childhood Plus I-Untold Biography Facts -Ulwaphulo-mthetho
U-Ashley Young uye wabhalwa ngokuba ngumphathi wokudibela kwi-Premier League. Utyholwa ngokusesikweni ngokudilika nge-press. Ngaphezu koko, u-Young uye wavuma kwangaphambili kubaphathi be-Sir Alex Ferguson kwaye UDavid Moyes malunga nokudilika ukufumana inzuzo engalunganga.
Siyabonga ngokufunda iindaba ze-Ashley Young Childhood kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!
Ibhola leDlalo leBhola
I-Japhet Tanganga Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Tariq Lamptey Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology leToldold
I-Phil Foden Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Ibali leChris Wilder yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Chris
I-Brandon Williams yobuntwaneni Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-John Lundstram Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biografics yeNobold
Ibali likaDavid De Gea Ubuntwana Ngaphandle kweNgcaciso yeBriography Facts
Oktobha 3, 2017
UAlton Valencia Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Februwari 1, 2018
I-Gareth Southgate yabantwana Ibali leNgxelo ye-Untold Biography Facts
Matshi 28, 2018
IGary Cahill Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
I-Mason Mount Ubuntwaneni Ibali leNqaku leNgcaciso yeB Untold Biology
Agasti 1, 2019